Military Council Troop's Yesagyo Immolation - Issue 58 » Myanmar Peace Monitor
Military Council Troop’s Yesagyo Immolation – Issue 58
School Head U Win Kyaw who joined the Civil Disobedience Movement (CDM), staff nurse Daw Zarli Naing, logistics comrade Ma Thae Ei Ei Win and CDM teacher Ma Khin Hnin Wai, Comrade Wukong.
They are the members of the N-YSO Guerrilla Force in Yesagyo Township of Magway Region. They all got arrested when the military council troops raided an outpost of the N-YSO at around3am on June 10th. The military council burned them alive, according to the statement by the N-YSO.
The Myanmar Peace Monitor’s weekly news review for this week focuses on the immolation committed by the military council in Yesagyo and resistance war in Magway Region.
Military Council Troop's Yesagyo Immolation - Issue 58 (8-14 June 2022) ENG
အကြမ်းမဖက် ပြည်သူ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) တွင်ပါဝင်သော ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဝင်းကျော်။ အထက်တန်းသူနာပြုဆရာမလေး ဒေါ်ဇာလီနိုင်။ ထောက်ပို့ရဲ‌ဘော်မလေး မသဲအိအိဝင်။ CDM ကျောင်းဆရာမလေး မခင်နှင်းဝေ။ ရဲဘော် ဝူခုန်း။
သူတို့အားလုံးသည် မကွေတိုင်း ရေစကြိုမြို့နယ်ထဲမှ N-YSO ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ နံနက် ၃ နာရီခန့်အချိန် N-YSO စခန်းအား စစ်ကောင်စီတပ်များ စီးနင်းဝင်ရောက်စဉ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း N-YSO က သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။
ယခုတစ်ပတ် Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ်စဉ်သတင်းသုံးသပ်ချက်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏ ရေစကြို မီးရှို့သတ်ဖြတ်မှုနှင့် မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ ခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေများကို လေ့လာတင်ပါသွားမည်။
Military Council Troop's Yesagyo Immolation - Issue 58 (8-14 June 2022) MMR
The military is unable to control some areas in Karenni State, local defense forces say
ဒီးမော့ဆိုအရှေ့ဖက်ခြမ်းရှိ ၁၀ နှစ်အောက် စစ်ရှောင်ကလေးငယ်တွေ ရာသီတုပ်ကွေး အဖြစ်များနေ June 28, 2022
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပစ်မဲ့ပြည်သူ ၃၀ ကျော်အား စကစတပ်က ဖမ်းဆီးထားကြောင်း AA ပြော June 28, 2022
စဉ့်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကောက်ရိုးပုံနှင့် သဲအင်းရွာများမှ ဒေသခံများ၏ နေအိမ်များအား စစ်ကောင်စီတပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီး June 28, 2022
“စကစရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့ တခြားပြည်မအင်အားစုတွေ NUG တို့ PDF တို့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အချင်းချင်းကြားမှာ ချိတ်ဆက်မှု စုစည်းမှုတွေကို မစုစည်းစေချင်ဘူး။ သွေးခွဲစေချင်တာလည်းပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကလည်း သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပါ။ သွားတွေ့တယ်ဆိုတာကလည်း သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အထမြောက်အောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက် နစ်နာတယ်” နန်းခွမ်လိတ် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ သုတေသီ) June 28, 2022